Turkiga oo ka iibinaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn dalalka Ethiopia iyo Morocco - Jowhar somali news leader
Turkiga oo ka iibinaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn dalalka Ethiopia iyo Morocco
By Mahad	 Last updated Oct 14, 2021
Turkiga ayaa ballaariyay dhoofinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyada oo heshiisyo iib ah la galay dowladaha Morocco iyo Itoobiya.
Diyaarad kasta oo ah nooca aan duuliyaha lahayn ee loo soo raro Itoobiya waxay halis u tahay inay sii huriso xiisadaha ka dhex jira xiriirkii Ankara iyo Qaahira oo markii horeba xumaa, khilaafka Addis Ababa iyo Qaahira oo ku saabsan warshada korontada laga dhaliyo ee wabiga Nile.
Diblumaasi codsaday in aan magaciisa la sheegin ayaa si gooni ah u sheegay in Morocco ay heshay dufcadii ugu horeysay ee diyaarado hubaysan oo ay dalbatay bishii May. Itoobiya ayaa qorshaynaysa inay hesho, laakiin arrinkan ma cadda, ayuu yiri diblumaasigan.
Ilo-wareedyadu ma sheegin tirada diyaaradaha ee drones-ka iyo weliba faahfaahin la xiriirta dhaqaalaha ku baxaya iibka Diyaaradahan aan duuliyaha lahayn.
Ra’iisul Wasaare Rooble oo booqday Xarunta Dowlada…
Xog rasmi ah ayaa muujineysa in dhoofinta hubka iyo duulista hawada ee Turkiga ay aad sare ugu kacday labadii bilood ee la soo dhaafay Morocco iyo Ethiopia, laakiin ma bixin faahfaahin ku saabsan iibinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Xiisaha sii kordhaya ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa kor u qaadaya dawladda Turkiga, oo isku dayeysa inay kordhiso dhoofinta si loo yareeyo dhibaatooyinka dhaqaale, waxayna hoosta ka xarriiqaysaa muhiimadda sii kordhaysa ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dagaalka casriga ah.
Milatariga Turkiga ayaa sanadkii hore diyaarado aan duuliye lahayn geeyay Suuriya iyo Liibiya, halkaas oo Ankara ay taageertay dowladda fadhigeedu yahay Tripoli ee ka soo horjeeda ciidamada bariga ee ay taageerayaan Ruushka, Imaaraadka Carabta iyo Masar.
Magaalada Nagorno-Karabakh, diyaaradahan ayaa caawiyay xulufada Turkiga ee Azerbaijan si ay uga adkaadaan ciidamada qalabka sida oo ay taageerayaan Armenia.
Dhoofinta iyo duulimaadyada ee Itoobiya ayaa kor u kacday $ 51 milyan saddexdii bilood ee ugu horreysay sannadkan, halka ay ka ahayd $ 203,000 isla xilligaas sannadkii hore, iyadoo kororka bilaha Ogosto iyo Sebtembar, sida laga soo xigtay Golaha Dhoofiyayaasha Turkiga.
Dhoofinta Morooko isla muddadaas waxay ahayd $ 78.6 milyan – $ 62 milyan bishii Sebtember oo keliya – marka la barbar dhigo $ 402,000 sannadkii hore
Qaar ka mid ah warbaahinta dalka Marooko ayaa baahiyay imaanshaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee hubaysan oo ka yimid dalka Turkiga.
Guud ahaan, dhoofinta hubka iyo duulista hawada ee Turkiga ayaa gaareysa US $ 2.1 bilyan saddexda rubuc ee ugu horreeya sannadkan, taas oo 39% ka ahayd US $ 1.5 bilyan sannadkii hore, sida laga soo xigtay Golaha Dhoofiyayaasha Turkiga.
Mahad 3449 posts
South African Defense Minister Briefly Detained by Veterans
Saciid Deni;”Farmaajo ma doonayo doorasho qof iyo cod iyo Dowlad Federal…